मकैको जुंगाको यस्तो चमत्कारिक उपाय जुन तपाइँलाई सायदै थाहा होला…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् । – yuwa Awaj
काठमाडौ : हामी सबैले मकै खान्छौं । तर हामी मकैको जुंगालाई काम नलाग्ने सोचि फाल्ने गर्दछौं । के तपाइँलाई मकैको जुंगाबाट हुने फाईदाबारे थाहा छ ?
आज हामी तपाइँलाई यसैको फाईदाबारे जानकारी दिन्छौं । जस्लाई बुझेर तपाइँ अचम्ममा पर्नुहुनेछ । मकैको जुंगाबाट हामी स्वास्थ्यसम्बन्धि फाईदा लिनसक्छौं ।
१) मृगौलामा पत्थरी हुनबाट बचाउँछ ।
२) मधुमेहलाई हटाउन मद्धत गर्छ ।
३) कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्छ ।
४) रगत जम्ने प्रक्रियामा सहयोग पुयाउँछ ।
मकैको जुंगाको प्रयोग विधि:
पक्कै पनि मकैको जुंगालाई सिधै प्रयोग गर्न सकिदैंन । यसको लागि विधिलाई अपनाउन जरुरी छ । निम्न विधिबाट मकैको जुंगाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सबैभन्दा पहिला एउटा भाँडामा पानीलाई उमाल्नुहोस् । त्यसपछि त्यस पानीमा मकैको जुंगालाई राख्नुहोस् । अनि स्वादको लागि कागतीको रस हाल्नुहोस् । त्यसपछि मिश्रणलाई एउटा ग्लासमा खन्याउनुहोस् । र दिनभरी घाममा सुकाउनुहोस् । अनि साँझको समयमा मह हालेर पिउनुहोस् ।
पायल्सको उपचारका लागि अमृत समान छ घिउकुमारी, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग !
पा’यल्स रो’गका बि’रामीहरु दिन प्रतिदिन बढ्दो अ’वस्थामा छन् । दैनिक खानपानमा ध्यान नदिँदा यस्तो रो’गको जोखिम झन बढ्ने चि’कित्सकहरु बताउँछन् । क’ब्जियत नै पा’यल्सको मुल कारण हो । जब क’ब्जियत हुन्छ, दिसा गर्दा बल पर्छ । त्यही बलले भित्रका र’क्तशिरालाई तन्काइ दिन्छ । यो क्रमस फैलन थाल्छ र गिर्खा बन्न थाल्छ ।
पा’यल्सका कारण म’लद्वार दुख्ने वा पोल्ने हुन्छ । पा’यल्स रो’ग निको पार्ने केही घरेलु विधि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यी विधि अपनाउँदा पा’यल्स हुन नदिन र पा’यल्स भएकाहरुलाई निको पार्न उपयोगी सिद्ध हुनेछ । पा’यल्स भएका विरामीहरुका लागि घ्यू’कुमारी अचुक औषधी हो । पा’यल्स भएमा विस्तारै घि’उकुमारीको गुदी लगाउने जसले शीतलता प्रदान गर्छ। बदामको तेल अर्थात् बदाम रो’गन पनि लगाउन सकिन्छ।
एक दिनमा ३–४ पटक म’लद्वारमा बदामको शुद्ध तेल लगाए आराम मिल्छ । काँचो केरा उसिनेर बिहान–बेलुका खाँदा पनि पा’यल्स रो’गीका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । पा’यल्सका रो’गीले तारेको/भुटेको तथा रेशारहित खाना खानु हुँदैन । क’ब्जियत हुन नदिन रे’सा युक्त (फाइबर) खाना प्रशस्त खानुपर्छ ।
अलिभ (जैतुन)को तेल लगाउँदा पा’यल्सका विरामीहरुका लागि आराम मिल्छ । मूलाको रस बिहान बेलुका खाँदा पा’यल्सका रो’गीलाई फाइदा हुन्छ । आँपको कोयाको गुदीको चूर्ण महसँग मिसाएर खान सकिन्छ। दिसा गर्दा समस्या हुनु नै यसको खास ल’क्षण हो । मलाशयमा भारीपन हुने, दि’सा राम्रोसँग नहुने, दु’ख्ने जस्ता सुरुवाती लक्षण हुन् ।
जति जति रो’ग बढ्दै जान्छ, उत्तिनै दुखाई बढी हुन्छ । गुद्वारमा मासुको डल्ला निस्कने, त्यसमा चिलाउने हुन्छ । क’ब्जियत आउन नदिनका लागि खानपानमा सर्तकता अपनाउनु पर्छ । किनभने अपच हुने खाने कुराहरु, जस्तो कि मैदाबाट बनेका, प्या’केटमा राखिएका, तारेका, भुटेका, जंक फूड, मसलेदार, मासुजन्य खानेकुरा क’ब्जियतको कारण बन्छ ।
Prevसरकार परिवर्तन र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा सुरु !
Nextमहमा अमला डुबाएर दैनिक खाँदा हुन्छ विश्वासै नलाग्ने यस्तो चमत्कार…पुरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
माधव नेपालले भने : ओलीबाट अब नेकपाको नेतृत्व सम्भव छैन…हेर्नुहोस् ।